परिचय : व्यवसायी र व्यवसायको - मोहन ढुङ्गाना
हरेक मानिसको चहाना हुन्छ उज्वल भविष्य अनि सु:खी जीवन व्यतित गर्ने । जीवन आफूले कल्पना गरेअनुरुप अघि बढ्न सबैलाई त्यति सजिलो भने हुँदैन । विभिन्न आरोह अवरोहहरुलाई पार गर्दै हजारांैको भिडमा आफू परिचित र सफल हुनु चानचुने कुरा भने होईन । जीवनमा केहि गरांै भनी कडा मेहनत र संघर्ष गर्दै सुनौलो भविष्यको कल्पना अनि अवसरको खोजीमा अष्ट्रेलिया आउनु भई हाल यूनिगो एजुकेशन मार्फत विद्यार्थीहरुको सेवामा सेवारत रहनु भएका सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ मोहन ढुंगाना ।
जेठो छोराको रुपमा जन्मिनु भएका उहाँ सानै देखि पढाईमा अब्बल हुनुहुन्थ्यो । सिद्धार्थ शिशु सदन टेकु काठमाण्डौबाट विद्यालयको अध्ययन प्रारम्भ गर्नुभएका उहाँले कक्षा ७ बाट बालकुमारी बोर्डिङ स्कूलमा अध्ययन गरी त्यहिं बाट एसएलसी सम्मको शिक्षा हाँसिल गर्नु भयो । नेपाल ल क्याम्पसबाट ल विषयमा व्याचलर उतिर्ण गर्नु भएका ढुंगानाले माष्टर अफ विजनेस स्टडिज (एमबिएस) भने शंकरदेव क्याम्पसबाट पूरा गर्नु भयो । नेपालमा रहँदा पढाई सँगै शिक्षक पेशामा आवद्ध रही विद्यार्थीहरुलाई केहि समय ज्ञान हाँसिल गराउनु भएका उहाँ एजुकेशन क्षेत्रमा अनुभवी हुनुहुन्छ । कलेज जीवन देखि नै विभिन्न माध्यमद्धारा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुमा संलग्नता जनाउदै आउनुभई विद्यार्थीहरुकै सेवामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । अध्यनकै शिलशिलामा सन् २००८ अगष्टमा अष्ट्रेलिया आई सेन्ट्रल क्विनसल्याण्ड यूनिभर्सिटीबाट माष्टर इन प्रोफेशनल अकाउन्टिङ (एमपिए) गरेर करिव डेढ वर्ष जति ट्याक्स अकाउन्टेन्टको रुपमा कार्य समेत गर्नु भयो । हाल श्रीमती प्रजुला सँग अष्ट्रलियामा बस्दै आउनु भएका यिनै श्रृजनशिल अनुभवी व्यक्तित्व मोहन ढुंगाना सँग द नेपाली भिजन अष्ट्रेलियाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :–
प्रश्न १, यूनिगो एजुकेशन कसरी शुरु गर्नु भयो ?
आफूले पहिला देखि नै गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिने उदेश्यले मार्च २०१५ देखि यूनिगो एजुकेशन कन्सल्टेन्टलाई नेपालको Aus Studies Consultants को सिष्टर अर्गनाईजेशनको रुपमा प्रमोट गर्दै आएको छु ।
प्रश्न २, तपाईहरुले आफ्नो व्यवसायबाट कस्ता सेवाहरु दिईरहनु भएको छ ?
यूनिगो एजुकेशन कन्सल्टेन्टले अष्ट्रेलियाको सिड्नी र मेलवर्नमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक परामर्श दिंदै आएको छ र साथै माईग्रेशन सेवा पनि रजिष्टर्ड माईग्रेशन एजेण्टको सहयोगमा दिंदै आएको छ ।
प्रश्न ३, एजुकेशन परामर्शदाताले सेवामा ध्यान दिनु पर्ने मूख्य कुरा के हुन सक्छन् ? छोटकरीमा बताई दिनुहोस् न ।
मेरो विचारमा एजुकेशन परामर्शदाताले निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
– आफ्नो पेशा वा व्यवसायको राम्रो सँग ज्ञान हुनु जरुरी छ, EstablishingaGood Rapport With The Clients, Honesty, Integrity and Accountability.
प्रश्न ४, व्यवसायलाई विस्तार गर्ने तथा कुनै नयाँ योजना गर्दै हुनुहुन्छ कि ?
मेलवर्नमा भएको कन्ट्याक अफिसलाई मेलवर्न शहरमा सार्ने योजना छ ।
व्यवसायमा आउनुपूर्व म शिक्षक थिएँ । मैले माष्टर र व्याचलर लेवलका विद्यार्थीहरुलाई Taxation र इकोनोमिक्स विषय पढाउथें । त्यसको साथै UNICEF कन्सलटेन्सको नेतृत्वमा ग्ल्क्ष्ऋभ को प्रोजेक्टमा सिनियर अकाउन्टेन्ट भएर काम गर्दथें । सन् २००६ देखि नेपालमा Aus Studies Consultant को फाउन्डर मेम्वर हुँदै यस शैक्षिक परामर्श दिने काममा आवद्ध भएको हुँ । व्यवसायमा आउनु पूर्व र आईसके पछि गर्ने मेहनतमा फरक हुँदैन तर कम्पनी प्रतिको जिम्मेवारीमा चाहिं फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ । आफ्नो कम्पनी भनेको आफूले जन्माएको सन्तान सरह हो जस्तो लाग्छ ।
प्रश्न ६, नेपाली समुदायमा चाहिने भन्दा बढी माईग्रेशन तथा एजुकेशन एजेण्ट भएका हुन ? तपाईको विचारमा के लाग्छ ।
त्यो गलत हो, जति धेरै कन्सल्टेन्स भयो त्यति नै धेरै राम्रो सेवाहरु क्लाइन्टले पाउँदछन् । यो अवस्थामा क्लाइन्टहरुले पनि राम्रो संस्था छान्न सक्नु पर्दछ । इन्ड्रष्टीमा जति धेरै प्रतिष्पर्धा भयो त्यति नै धेरै त्यतिनै राम्रो सेवा प्राप्त हुन्छ जस्ले गर्दा लामो समय सम्म क्लाईन्ट लाई नै बढी फाईदा पुग्छ ।
प्रश्न ७, आफ्ना ग्राहक तथा विद्यार्थीहरुलाई तपाई कुन हद सम्मको सेवा दिन सक्नुहुन्छ अर्थात ग्राहकहरु तपाईकोमा नै सेवा लिन किन आउनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्नु हुन्छ ?
भनिन्छ It Costs Five Times As Much To Coin A New Customer Than To Keep A Current One त्यसैले मैले दिने सेवा Client Focused Approached Model मा आधारित छ । मेरो अनुभव अनुसार ग्राहकहरुले मलाई नै रोज्ने कारण निम्न हुन सक्छ:
– मेरो पेशा प्रतिको honesty and Accountability, मेरो पेशाको विषयगत ज्ञान, आवश्यकता अनुसार मैले दिने व्यक्तिगत सेवा र Telling the Clients Truth and I love What I do.
प्रश्न ८, यहाँको नेपाली समुदायलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? समुदायलाई भन्नु पर्ने केहि छन् कि ?
मेरो अनुभव अनुसार यहाँको सबै नेपाली समुदायहरु धेरै सहयोगी र मनकारी भावना भएकाहरु पाएको छु । म समुदायलाई के भन्न चहान्छु भने तपाईहरुको सहयोगी हातहरुले गर्दा नेपालमा समस्या परेकाहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भईरहेका छन् । त्यसैले त्यो सहयोगी भावना र सहयोगी हातहरु सँधै कायम रहिरहोस् ।
प्रश्न ९, फुर्सदको समय कसरी बिताउनु हुन्छ ?
साथीभाई र परिवारसँग भेटघाट, नयाँ ठाउँको खोजी गर्ने, कितावहरु पढेर बिताउने गर्दछु ।